Uyenza njani igridi yolungelelwaniso- iGeofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Indlela yokudala igridi yokudibanisa
Indlela yokudala igridi yokudibanisa
Ngaphambi sibone yenziwa njani i-cadastral quadrant mesh, ngoku makhe sijonge indlela yokwenza igridi yokulungelelanisa nesicelo se-CAD ... ewe, loo nto iArcView kunye neManfold yenza lula kakhulu. Kwakhona nge-AutoCAD unako usebenzisa i-CivilCAD.
Kule meko siza kubona indlela yokwenza ngayo nge-Microstation Geographics, apho abaninzi abasebenzisi abazi into eyenziwa yinkqubo; isilumkiso, oku akukona okuqhelekileyo iMicrostation.
1. Kufuneka ubonelelwe ngenkqubo yokuqikelela.
Ukubona indlela ukunikezelwa kwayo kubelwe ngayo okanye utshintshile, uya kubona kwisithuba sangaphambili.
2 Ukuchaza i-Quadrant
Kwimeko yam ndinayo le mephu, ndayidala i-quadrant, njengaye si hlalutya kwisithuba esinikezelwe kuso.
3 Iimpawu zokuqwalasela eziphambili
Ukwenza ukuba iphaneli isebenzise ukuqwalasela i-mesh, khetha izixhobo / ulungelelwaniso lwenkqubo / izixhobo. emva koko sisebenzise i-icon yokuqala (iiparameter zokuvelisa iigridi).
Nazi apha iimpawu ezifunwayo ziqwalaselwe, makhe sibone iifowuni eziphambili, ezi zingatshintshwa nanini na kwinkqubo:
Isakhelo. Oku kwenziwa ngophawu olungasentla "Umgca ococekileyo" Umgca ococekileyo usebenza ukwenza isakhelo
Ref = Lat / elide. Kungenxa yokuba kwinkqubo yolungelelwaniso lwendalo ndiyincedile
Ref = Master. Olu lulungelelwaniso olusisiseko, lukwacwangcisiwe njengoko kuchaziwe kweso sithuba.
Qalisa. Eli qhosha kukuvelisa iigridi, ndincoma ukuba ulisebenzise ude ulungiselele iimpawu.
Kwicandelo elibizwa ngokuba yi "Components" ungenza okanye uvale iilebhile ofuna ukuziqwalasela okanye uzenze zingasebenzi.
I "Deltas" ukhetho kukuchaza ukuba igridi iya kusekelwa kumgama ochaziweyo (umzekelo a I-UTM ye-1000 x 1000 mts.) okanye enye imitha yonke imizuzwana ye-30.
Ikhetho lokunyusa lisetyenziselwa ukuchaza ukuba i-mesh iya kuvela kwiimpazamo zegridi okanye ukusuka kwikona elisezantsi le-quadrant (umvelaphi)
Kubonakala kunokwenzeka ukuba kuchazwe ukuba izakhi ezivelisiweyo ziya kuhamba ngophawu lomlinganiselo okanye ngeempawu (iimpawu) zeprojekthi yeGeographics.
4. Olunye uhlengahlengiso sisenzo ... hayi ngesilingo nangempazamo kodwa ngokukhululeka ngento evelisiweyo ekugqibeleni. Kule ArcView y asibonise Bashaya nayiphi na ithuluzi le-CAD, kodwa akukho ndlela i-Microstation Geographics V8.
Cwangcisa umgca. Ilungiselela ukuqwalasela isakhelo esicuthayo
KwiGrey Frame. Ukuqwalasela i-mesh
iilebhile. Ukuchaza iitekisi, ukuba ufuna uququzelelo kwiikona (NL Corner), kwimiphetho yegridi (Umgca weGridi), Kwiziphambuka zeziphambuka zendlela enqamlezayo (Phawula uMarck), ubungakanani bombhalo, izimbo, iidesimali , ifomathi yesidanga ... blah, blah, blah
Umgca ococekileyo. Ukubonisa isakhelo esichazela imitha kwaye iqulethe indawo yegridi: kucetyiswa ukuba ukhethe ukhetho lwe-4 akusiyo umxube wokuxhamla.
Igridi. Ezi ziqwalaselwe ngezi template zilandelayo; Imigca yegridi yokuchaza umfuziselo wegridi, amakhalane awela umnqamlezo kwiziphambuka ezinqamlezileyo, phawula amanqaku emigca yomda.
Xa yonke into sele ichaziwe, "Yenza" isetyenzisiwe, zonke izinto ziyi-vectorial kwaye zigcinwe kumanqanaba (iingqimba) ezicwangcisiweyo, ukuba ziveliswa kwakhona zitshintshwe.
Ekugqibeleni imephu ibonakala ngathi, nangona ndivuma, kukho ezinye iindlela ipress kunye nemephu. Umda wangaphandle awubunjwanga kule nkqubo, unokuveliswa njengeseli okanye ubeko (iimodeli)
ArcView GIS asibonise
THETHA OKUNGENAYO KUKHO IMIQONDO EMININZI ENGAQONDIYO NDIFUNA I-LISP, INKQUBO ISELE IKHUTSHELWE UKUZE IYENZE I-GRID KULUNGILE? UZA KUNDENZELA UMBUZO… ENKOSI
NDINOKUBA NOMDLA WOKWAZI NGOLAWULO LWE-CIVILCAD… IMIBULISO !!!
Sawubona, ungachaza indlela eyenziwa ngayo? Ndazama ukuyilayisha ngokulayishwa komsebenzi kodwa ndingayifumani, umntu onokuyichazela yona? Ndiyakuyixabisa, ndiyifunayo ngokwenene kum msebenzi wam.
lisp isebenzela i-autocad 2010 .... njenge
Ngo-AutoCAD igridi yenziwe nge-regularp routine, ndiyisebenzisa kwiminyaka eyi-10 edlulileyo
(defun strpto (aa / ende)
(setq ende (strlen aa))
(setq l (fakela l (uluhlu x)))
(uludwe lwe-setq (uludwe lwe-cdr)
(uluhlu (iminini (imoto l) (cadr l)) (max (imoto l) (cadr l)))
;; I-intersection inikwe iX X
(ukuba (= 0.0 b); akukho kungqubana
(Defun IntersecY (/ l uluhlu)
Uluhlu (Uluhlu (CalculaY a1 b1 c1 startx) (CalculaY a2 b2 c2 startx)
(ngoxa (/ = uludwe luyiyo)
(setq kunye (uludwe lwemoto))
(ukuba (kunye (/ = / nil) (= kunye no-MIN))
(setq l (fakela l (uluhlu y)))
;; Inkqubo e phambili
i-alpha startX iqalisa i-min min minY max max maxY)
(setvar "CMRIGHT" 0)
(yalela “LALAYER” “M” “grid” “C” “8” “””))
(seta i-p1 (indawo yokufumana “\_nFaka i-vertex yommandla")
p2 (indawo yokufumana p1 “\_nFaka enye i-vertex”)
(yalela “UMGCA” p1 p2 “”)
(ukuba (> (cadr p1) (cadr p2)); soloko p1 ezantsi
(setq p3 (indawo yokufumana p1 “\_nFaka indawo yoBubanzi beNgingqi “)
l (umgama p1 p3); ukubala amanqaku p3 kunye p4, ukufana
i-alpha (i-angle p1 p2); ukuya ku-p1 kunye ne-p2 kumgama l
i-alpha (+ (/ pi 2) i-alpha)
(ukuba (> (imoto p3) (imoto p1))
(ukuba (= (imoto p1) (imoto p3))
(ukuba ((- maxY qala) (* 2 phezulu))
(yalela “TEXT” (uluhlu (+ x1 dl) (+ startY dh)) phezulu 0 coordY)
(yalela “TEXT” “R” (uluhlu (- x2 dl) (+ startY dh)) phezulu 0 coordY)
(setq qalaY (+ uqale ukuqala))
(ngelixa ((- - startX minX) (* 2 ephezulu))
(umyalelo “TEXT” (uluhlu (- startX dh) (+ y1 dl)) phezulu 100 coordX)
(yalela “TEXT” “R” (uluhlu (- startX dh) (- y2 dl)) phezulu 100 coordX)
(ukuba (> (umgama p1 p3) (umgama p1 p2))
(ukuba (okanye (/ = = i-alpha pi) (/ = i-alpha 0.0))
i-alpha (* -1 (/ (* 180 alpha) pi))
i-p4 (uluhlu (- (((imoto ye-p4) (cos alfarad)) (* (cadr p4) (ngaphandle kwe-alfarad)))
(+ ((imoto p4) (ngaphandle kwe-alfarad)) (* (cadr p4) (cos alfarad)))
i-p1 (uluhlu (- (((imoto ye-p1) (cos alfarad)) (* (cadr p1) (ngaphandle kwe-alfarad)))
(+ ((imoto p1) (ngaphandle kwe-alfarad)) (* (cadr p1) (cos alfarad)))
isiseko (uluhlu lwe-0.0 0.0); Imvelaphi
Hayi, igridi oyenzayo kwimodeli uze uyibambe kwindawo ephepheni?
Ndikuxelela oku kuba ndisebenzisa isixhobo "sokulungiselela ushicilelo" kwaye ndingathanda ukufaka umgca-ococekileyo ngokungagqibekanga kwitemplate ewufakayo, kwaye kufuneka ndibethe iqhosha lokuvelisa kuphela.
Iingxaki ezivelayo, ndingenza njani ulungelelwaniso "lwendawo yephepha" lube lolo mzekelo?
IJejejej sinokubonga njalo
Ndiye ndafumana ingxaki.
Ngenxa yokuba ndicinga ukuba i-Microstation Geographics ilingana ne-AutoCAD Imephu ndicinga ukuba unako.
Ndiza kukhupha i-trial version kwaye ndibaxelele ukuba unokukwazi okanye akunjalo.
Inyaniso kukuba mna ndiye ndamangaliswa, ngaba oko kungenziwa ngeMaphu?
I-Autocad Civil 3D 2008 iquka i-Autocad Imephu, ngaba unokuchaza ukuba yenziwa njani?
Hayi nge-autoCAD Civil 3D, kuba oku kuyakhathalela ukuba inkqubo iphatha inkqubo yoqikelelo. Kodwa ewe ngemephu ye-AutoCAD 3D ungenza into efanayo.
Ingenziwa nge-Civil 3D ye-AutoCAD 2009, ndicinga ukuba ivumela ukuba ixhumeke kwi-Google Earth, ngoko kufuneka ixhase izicwangciso.
Ingaba kukho into efanayo kwi-autocad yomphakathi?